Apartment rental fees lower due to sluggish demands | Myanmar Business Today
HomeBusinessApartment rental fees lower due to sluggish demands
Yangon’s real estate rental market sees lower rental fees as landlords lower their rental fees due to lower demands.
“There are some activities. But rental fees are lower,” an official from Myanmar Real Estate Services Association, told Myanmar Business Today.
Transactions in the real estate sector almost stopped during the lockdown. Landlords also reduced the rental fees for their tenants when they signarental agreement to extend the rental period.
The lower rental rates can differ based on the locations and apartments quoted around K25 million are now around K22 million.
The market is slowly picking up since the end of May when the pandemic curve seemed to start flattening.
လက်ရှိရန်ကုန် အိမ်ခြံ မြေစျေးကွက်တွင် အငှားစျေးနှုန်းများ ကျဆင်းကာ အိမ်ပိုင်ရှင်များက စျေးနှုန်းလျှော့ ပေးမှုများှေိကြောင်း စျေးကွက်အတွင်းမှ သိရသည်။
“အငှားတွေကတော့ဖြစ်တယ်။ အငှားစျေးနှုန်းကျလာတယ်ပေါ့။ မြန်မာတွေကအိ မ်ငှားနေကြတာတွေ အိမ်ရှင်တွေကလျှော့ပေးလာကြတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
COVIDကာလတွင် အိမ်ခြံမြေနှင့် တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ် ရပ်ဆိုင်းလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မဖြစ်မနေငှားရမ်းနေထိုင်သော ပြောင်းရွှေ့ လုပ်သားများသည် အိမ်ငှားနေထိုင်ခဲ့ကြရာ အိမ်ငှား စျေးကွက်သည်လှုပ်ရှားနေခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တဝန်းရှိ တိုက်ခန်း၊ အိမ်ပိုင်ရှင် အချို့သည် COVID ကာလတွင် မိမိတို့ငှားရမ်းထားမှုများကို စာချုပ်ထမ်မံချုပ်ဆိုငှားရမ်းခဲ့ကြရာတွင် စျေးနှုန်းအနည်ငယ်လျှော့ပေးခဲ့ကြပြီး ဂိုတောင်များ ငှာရမ်းမှုသည်လည်း စျေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အငှားစျေးကွက်အတွင်း နားလည်မှုဖြင့် စျေးနှုန်းလျှော့ချပေးခဲ့မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း တစ်မြို့နယ်နှင့် တစ်မြို့နယ် မတူညီကြောင်း၊ တချို့မြို့နယ်များ ငါးသောင်းမှ တစ်သောင်းခန့်အထိ လျှော့ချမှုများရှိခဲ့ကြောင်း ငှားရမ်းနေထိုင်သူတို့ထံမှ သိရသည်။
ထို့အပြင် တိုက်ခန်းဈေးနှုန်းများသည်လည်း ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဈေးနှုန်းကျဆင်းသည်ဟု အိမ် ခြံမြေအကျိုးဆောင်အချို့က ပြောသည်။
ဒေါပုံ၊ သာကေတမြို့နယ်များတွင် ယခင် ကျပ်သိန်း ၂၅၀ခန့်ဈေးခေါ်သည့် တိုက်ခန်းများက လက်ရှိအချိန်တွင် ကျပ်သိန်း ၂၂၀ ဝန်းကျင်သို့ ဈေးနှုန်းလျော့ခဲ့သည်ေ
လက်ရှိ ပြည်တွင်း၌ COVID-19 ရောဂါ အနည်းငယ်တည်ငြိမ် လာခြင်းကြောင့် မေလကုန်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်၌ အရောင်းအဝယ်အနည်းငယ် ပြန်ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။
Previous articleCentral Bank Purchases $169 Mln in over Six Months
Next articleMyanmar Targets6% GDP Growth in 2020-21